Isitudiyo seTropical Oasis, kufutshane neRockley
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguLorraine Theresa
Isitudiyo sakho "seTropical Oasis" sikulindile !!!
Hlaziya kwesi situdiyo sithe cwaka, sizolile entliziyweni yeRockley kuNxweme oluMazantsi!
Siyile le flethi sicinga ngawe. Sibekwe kwindawo efanelekileyo kumgama wokuhamba ukuya eRockley Golf Club, Accra Beach kunye nolunye ulwandle, iivenkile ezinkulu, iindawo zokutyela nokunye okuninzi.
Sifuna iholide yakho igqibelele.
Umxube odlalwayo wezinto zokuhombisa zangoku kunye nezezandla ezenziwe ngemibala yolwandle kunye nesibhakabhaka, yenza le studio ibe yindawo yolonwabo kunye noxinzelelo!
Ixhotyiswe ngekhitshi eligcweleyo, kunye nendawo yangaphandle - yeyona ndawo ifanelekileyo yokubona isiqithi sethu, sikhululekile.
Istudiyo sethu esitofotofo sivulekile ngesitayile sinomxholo wale mihla, kubandakanya isitovu sombane esitshisa ezibini, i-oveni yetoaster, iketile kunye nefriji encinci, egqunywe ngobunono ezantsi kwekhawuntara yegranite. Siphinde sadibanisa indawo yokuhlala ngaphakathi kwendawo yokulala, indawo ekhululekile.
I-decor yethu isekelwe "kwi-blues" yesiqithi sethu, kuzo zonke iinkcukacha, ukudala indawo eshushu kwaye egcwele ukufudumala kwesiqithi.
Ucango lwethu olubonakalayo "lulwandle oluluhlaza okwesibhakabhaka", alongezi nje kuphela umbala ogqamileyo we-pop-up kwindlu, kodwa yongeza kubumfihlo begumbi lokuhlambela.
Sifuna ukuba uzive usekhaya ukuze sibe nayo yonke into oya kuyidinga - ukusuka kwisiseko sakho sesidlo sakusasa (amaqanda, ijusi, ubisi, ikofu/iti njl.njl), izibiliboco zeBajan okanye iiBhanki ezibandayo; zonke izinto zakho zangasese, iitawuli zolwandle kunye nesiqhelo, iSuntan kunye neloshini yelanga.
Ufuna nantoni na, vele ubuze :)
4.88 ·Izimvo eziyi-32
Indawo yethu ikwi-cul-de-sac, indawo ekhuselekileyo nethe cwaka. Siphambi kweKlabhu yeGalufa yeRockley edumileyo, kwaye nokuba uyayidlala igalufa okanye hayi, le ndawo ikulungele ukuhamba okanye ukubaleka. Usenokude ukrobe kwiinkawu eziluhlaza.
Siyafumaneka kwiindwendwe zethu 24/7. Sisenext door sifikeleleka ngalo lonke ixesha. Ufuna nantoni na, buza nje :)
Simema iindwendwe zethu ukuba zihlanganyele nathi kusasa yethu yeGreek Coffee.
Isaci sethu: "Ngamana Bonke abangena njengeeNdwendwe bangahamba njengabahlobo".
IiNdwendwe zethu zamkelekile ukuba zonwabele iigadi zethu, zihlale ngaphandle kwaye zingcamle ubushushu besiqithi.
Sifuna uzive usekhaya.
Simema iindwendwe zethu ukuba zihlanganyele nathi kusasa yet…